Iprofayile yeXIKOO | Ixabiso lentengoXIKOO Industrial Co., Ltd.
Ngaphezulu kwe-13years iimveliso ezintsha eziphuhlisayo kunye neemodeli ezindala ezinyusayo, kukho iintlobo ezingaphezu kwe-20 zeemodeli zesicelo esahlukileyo. Iimveliso eziphambili zeXIKOO zibandakanya ukupholisa umoya opholileyo, ukupholisa umoya opholileyo, ifestile epholileyo yefestile, umoya opholileyo we-centrifugal, umoya opholileyo welanga DC kunye neendawo ezipholileyo zomoya. esetyenziswa ngokubanzi ekhaya, eofisini, ezivenkileni, esibhedlele, kwizikhululo, ententeni, eluhlaza, ivenkile, ivenkile, indawo yokugcina izinto kunye nakwezinye iindawo.
I-XIKOO inolawulo olungqongqo lomgangatho wemveliso kunye nohlolo kwinkqubo nganye yemveliso Ukusuka kukhetho lwezinto, ukuvelisa itekhnoloji, imveliso, iphakheji kunye novavanyo. Isipholisi somoya sivunyiwe yi-CE, SASO, ROHS, IEC njl. Kwaye imveliso yethu ikwaqatshelwa ngabathengi bethu, abathengi bethu abaqhelekileyo bagcina intsebenziswano yexesha elide kunye nathi.
I-XIKOO inethiwekhi yokuthengisa yasekhaya igubungela amaphondo angama-21 kunye nemimandla engama-86 ephucukileyo, ngaphezulu kwe-112 labasasazi kwilizwe liphela. Kwaye iimveliso zithengiswa kumazwe angama-35 aphesheya nakwimimandla. Ingakumbi ukuphuhlisa abathengi bexesha elide eSaudi Arab, Kuwait, Mali, Morocco, Sudan, Vietnam, Malaysia, Thailand, USA, Brazil, Germany, Australia nakwamanye amazwe.
I-XIKOO Gcina iphanda kunye nezinto ezintsha, iphumelele ishishini lobuchwephesha, imveliso ephezulu kunye nezinye iimbeko. Ndifumene ipatent yoyilo, ipatent yokuqamba kunye nelungelo elilodwa lomenzi. I-fan epholileyo yomoya kukusebenzisa okuphantsi kunye nemveliso enobume bendalo, i-XIKOO iphinde iphuhlise umthombo wamandla ombane opholileyo womoya opholileyo. Siyathemba ukuba negalelo ukonga umbane wethu ehlabathini kunye nolwakhiwo lokusingqongileyo friendly ngokusebenzisa XIKOO ukukhuthazwa umoya kupholile kunye nesicelo.